नेपालीबाट आश छैन, विदेशमा रहेका नेपालीले कै गर्छन् कि ? - Everest Dainik - News from Nepal
नेपालीबाट आश छैन, विदेशमा रहेका नेपालीले कै गर्छन् कि ?
नयाँ शक्ति नेपालले जनताद्वारा प्रत्येक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणाली र बिदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई मतदानको व्यवस्थाको लागि दबाबमूलक कार्यक्रम गरेको छ । कार्यक्रम राजधानीको माईतिघरमा धर्ना, माईतिघरदेखि बानेश्वरसम्म र्यालि, बानेश्वरमा धर्ना र कोणसभा गरि सम्पन्न गर्यो ।
तस्वीर : विक्रम रत्नको फेसबुकबाट
ट्याग्स: Kathmandu, naya shakti nepal